Laamane laga soo badbaadiyay Markabkii ku dagay Xeebaha Mediterranean – SBC
Laamane laga soo badbaadiyay Markabkii ku dagay Xeebaha Mediterranean
Posted by Webmaster on January 15, 2012 Comments
Kooxaha ka shaqeynaya gurmad u sameynta Markabka dalxiis ee ku dagay xeebaha Mediterranean ayaa sheegay inay markabka gudihiisa ka soo saareen laba qof oo lamaane ah kuwaasi oo u dhashay wadanka Koonfurta kuuriya iyaga oo ku jiray mid ka mid ah qolalka markabka.
Markabkan dalxiis oo lagu magacaabo Costa Concordia ayaa waxaa weli soconaya in laga raadiyo dadka qaar oo markabka la socday oo la wayay ka dib markii uu markabkaasi ku degan xeebaha Mediterranean.
Kooxaha gurmadka ayaa sheegay in laamaanaha oo ku jiray bishii malabka ee ugu horeysay guurkooda ayaa laga maqlay cod iyaga oo ku jira qol ka mid ah qololka hoose ee markabka ka dibna laga oo bixiyay iyaga oo cafimad qaba.
Markabka dalxiis oo degay 24-kii saac ee la soo dhaafay ayaa waxaa laga soo samataxibiyay dadkii saarnaa qaarkood kuwaasi oo ku dhow 4,000 oo ruux waxaaana weli la la’ayahay 40 qof oo aan la ogeyn meel ay jaan iyo cirib dhigeen.
captainka Markabka Costa Concordia ayaa la geeyay goob gaar ah oo ay ciidamada amaanka su’aalo ku weydiinayaan taasi oo la xiriirta sida ay dhacdadan u dhacday xilli xaalada badda iyo jawiguba ay ahaayeen kuwo aad u wanaagsan
Kooxaha Gurmad ayaa ilaa iyo iminka xaqiijiyay geerida sadex qof oo markabkasi la socday sadexda qof ee dhintay laba ka mid ah waa faransiis halka mid kalena uu yahay shaqaalaha markabka oo u dhashay wadanka Peru.
Markabkan dalxiis oo ku dagay meel aad ugu dhow xeebaha dalka talyaaniga aya waxa gurmadka ugu badan sameeyay Dowlda talyaniga oo samatabixisay dad ku badan 3,000 oo qof.
Axmed Maxamud Nuune